ကွာလာလမ်ပူရောက် ဗီယက်နမ် မိန်းမခါးပိုက်နှိုက်များ (မလေးရှားသတင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကွာလာလမ်ပူရောက် ဗီယက်နမ် မိန်းမခါးပိုက်နှိုက်များ (မလေးရှားသတင်း)
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Oct 31, 2012 in Copy/Paste |4comments
by ဧဒင်ဥယျာဉ်(အွန်လိုင်းပေါ်ကအိုအေစစ်) on Wednesday, October 31, 2012 at 11:02am ·
“နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ အမျိုးသမီး ပျံကျဈေးသည်တစ်ယောက်က မိလို့ပါးရိုက်ပြီး ဆူပူလွတ်လိုက်တာရှိပါသေးတယ် လို့” ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု့ နှင့် တိုင်းတန်းရန် ဌာန အကြီးအကဲ Datuk Seri Michael Chong ကြီးမှုးကျင်းပတဲ့ ပြည်သူအသိပေး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပြသွားခဲ့ပါသည်။
ဘုရား၊ ဘုရား ရွာထဲရောက်လာရင် ဒုက်ခပါပဲ။
နှိုက်တာနဲ့ လုတာနဲ့မှာ သဘောတော့ကွာတယ်ဗျ
နှိုက်တာက မသိအောင်လုပ်တာ လုတာက အလစ်မှာဗျောင်လုပ်တာပေါ့နော
နှိုက်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် လုတာဘဲဖြစ်ဖြစ် အနှိုက်ခံရတဲ့သူ အလုခံရတဲ့သူဟာ
လုပ်တဲ့သူဟာ မိမိလုပ်မယ့်သူရဲ့ သတိမဲ့မှု့ကို အခွင့်ယူပြီးလုပ်ကြတာကလား
ဘယ်လောက်တောင်ပါသွားလည်းမသိဘူး မြေကြီးမှာလှိမ့်ပြီး ငိုနေတာ
ဆိုလိုတာက အချို့က ကုန်သည်သဘောမျိုးနဲ့ ဈေးဝယ်ကြတဲ့အခါ ပစ္စည်းဖိုးကို
ကက်ရ်ှပေးပြီးဝယ်တဲ့အတွက် ငွေကို အထုတ်လိုက် ပိုက်သွားရတယ်
အချို့ကတော့ ကျသင့်ငွေကို ဒစ်ပိုစစ်ပေးတယ် စရံငွေပေါ့
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ မိမိတို့မှာ စီးပွားဖြစ် ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာ ပါရင်တော့
ဥစ္စာရူးတယ်ပြောပြော ကိုယ့်အထုပ် ကိုယ်ပိုက်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ
ပတိုနာမ်း လို့ခေါ်တဲ့ ဘိုင်းရော့စကိုင်းအောက်က ဈေးတစ်ခုမှာပါ
ကောင်မလေးက ကျွတ်ကျွတ်အိပ် တစ်လုံးကို သူ့ဖာသာ ကိုင်ပြီး ကာထားတာ
ဒီသတင်းလေးမှတ်ထားမှ သတိပေးသင့်သူတွေကို ပေးမှပဲ …. မလေးရှားနိုင်ငံမှာက အလစ်သုတ်သမားတွေ များပြားနေတာကြာပါပီ ………. မြန်မာတစ်ယောက်တည်းသွားလာဖို့ မကောင်းပါဘူး … အဖွဲ့အသင်းနဲ့သွား မှပါ … ငွေတွေအများကြီး ကိုင်သွားလို့လည်းမကောင်းတဲ့နိုင်ငံပါ ….
ဗလချိုက်အမနှိုက်တာတော့ ခံသင့်တယ်ထင်တာပဲ…။ သူတလှည့် ကိုယ်တလှည့်ပေါဗျာ၊ လောကဂျီးမှာ ကိုယ်ကချည်း နှိုက်နေလို့ သင့်တော်ပါ့မလား…။